ကွယ်လွန်သွားသော ကဗျာဆရာနှင့် ကဗျာဆရာကွယ်လွန်ခြင်း (သစ္စာနီ) | လမ်းအိုလေး
ကွယ်လွန်သွားသော ကဗျာဆရာနှင့် ကဗျာဆရာကွယ်လွန်ခြင်း (သစ္စာနီ)
February 2, 2013 by lanolay	2 Comments
လက်ကသာမက နှုတ်ကလဲ ပြောင်ကျကျ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနဲ့ မခံသာအောင် ပြောတတ်လို့ နှုတ်မရွံ့လှသန်းလို့လည်း နာမည်ကြီးပါတယ်။ ကဗျာဆရာ ကြီးကြီးငယ်ငယ် (ကျွန်တော်တို့ အပါအဝင်) လှသန်းရဲ့ ပါးစပ်ဒဏ် မခံရဖူးသူက မရှိသလောက်ပဲ။ ဒါပေမဲ့ သူ့အသုဘကျတော့လည်း စည်လိုက်တာ။ မြန်မာတစ်ပြည်လုံးက ကဗျာဆရာတွေ ရောက်လာကြတယ်။ ဘာဖြစ်လို့ လှသန်းကို ဒီလောက်ချစ်ကြတာလဲ။
ကွယ်လွန်သွားသောကဗျာဆရာနှင့် – ၁ (သစ္စာနီ)
ကွယ်လွန်သွားသော ကဗျာဆရာနှင့် – ၂ (သစ္စာနီ)
ကွယ်လွန်သွားသော ကဗျာဆရာနှင့် – ၃ (သစ္စာနီ)
ကွယ်လွန်သွားသော ကဗျာဆရာနှင့် – ၄ (သစ္စာနီ)
ကွယ်လွန်သွားသော ကဗျာဆရာနှင့် – ၅ (သစ္စာနီ)
ကွယ်လွန်သွားသော ကဗျာဆရာနှင့် – ၆ (သစ္စာနီ)
Categories: Articles | Tags: လှသန်း, သစ္စာနီ, ဆောင်းပါး, Hla Than, lanolay, Thit Sar Ni | Permalink.
2 thoughts on “ကွယ်လွန်သွားသော ကဗျာဆရာနှင့် ကဗျာဆရာကွယ်လွန်ခြင်း (သစ္စာနီ)”
more stuff on this dead poet LOL? kindly oblige if u can…thank u
Much obliged http://goo.gl/gSp42